Buy EZ Jet Water Cannon (5,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ရောင်းချသူ: Thu Zar
အထူးရေပန်းစားနေသော 8 in 1 မျိုးသုံးရေပိုက်ခေါင်းလေး နှင့် မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသည်.
ကျား/မ မရွေး styleမပျက်
အလုပ်မရှုပ်ရပဲ ကားရေဆေးလို့ရတဲ့ ကားရေဆေးခေါင်းလေးပါ...
စက်ဘီး ၊ ဆိုင်ကယ် ရေဆေးမလား....?
ကြမ်းခင်းတွေ ၊ သံမံတလင်းတွေ ညစ်ပတ်နေလို့ ဆေးမလား...?
ရေဖျန်းခေါင်းလေးကို လှည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ်လိုချင်သလို ရေထွက်ပုံစံကို ညှိယူလို့ရပါတယ်...
ရေပန်း ပုံစံ ၈ မျိုးပါဝင်တဲ့ စွမ်းအားပြင်း ရေပန်းထွက်ပေးတဲ့ လျှပ်စစ်မလို manual စက်လေးပါ။
1..မိမိ၏ ကား အား အိမ်မှာ တင် အလွယ်တကူ ဆေးကြာနိုင်ဖို့ ဆပ်ပြာ ရေထည့်ရန်ခွက်လေးပါဝင်ပြီး ကားအောက်ပိုင်း ကားပြင်ပ body တခုလုံးအား မျိုးစံ ရေပန်းပုံစံ change ပြီး အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
2..ခြံတွင်းရှိမြက်ခင်းများ သစ်ပင် ပန်းပင်များအား ရေလာင်း ပေါင်းသင်ပေးနိုင်ခြင်း။
3..အိမ်တွင်း ကြွေပြား ကြောက်ပြား နှင့် bath room အတွင်း ဂျွတ်တက်နေသော ဂျီးများအား သန့်စင် ပေးနိုင်ခြင်း...
ရေအားပြင်းပြင်းထွက်ဖို့ အတွက် pressure ပန့်ဖြစ် တွဲသုံးပါ..
အလွယ်တကူဖြုတ်တပ်နိုင်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းရာတွင် အချိန်နှင့်နေရာ ကျယ်ဝန်းစွာ မလိုအပ်ခြင်း
Priceး5000 ks
Phး09 975632367
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အရောက်ပို့ delivery ရှိသလို အခြားမြို့နယ်များကိုပါ ငွေလွှဲရောက်တာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ကားဂိတ်ကို ပို့ပေးပါတယ်းးး
မှတ်ချက် - တန်ဆာခကို ဝယ်ယူသူဘက်မှ
အမည်: EZ Jet Water Cannon